Mpitarika ara-panahy Mayana nampagaina ho ‘mamosavy’ tao Goatemalà, navotsotra avy eo · Global Voices teny Malagasy
Mitranga ao amin'ny faritra anoheran'ny vazimba ny asam-pitrandrahana goavana izany
Voadika ny 18 Jona 2022 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Esperanto , Français, Español
Saripika avy amin'i Juan Bautista Xol, nahazoana alalana.
Ny lahatsoratra etoana dia navoakan'i Elías Oxom voalohany tao amin'ny Prensa Comunitaria, avy eo namboarina sy navoakan'ny Global Voices indray araka ny fifanarahana ara-pampitam-baovao nifanaovana.
Navotsotra i Adela Choc Cuz, mpikambana ao amin'ny Filankevitra ara-drazana Q’eqchi’ Maya avy ao amin'ny monisipaliten'i El Estor ao Goatemalà atsinanana, sy ny zanany vavy Sandra Tec Choc, tamin'ny marainan'ny 17 Mey, rehefa nisy andian'olona nitazona azy ireo takalon'aina, miampanga azy ireo ho namosavy sy nampitondra faisana ny vehivavy iray avy amin'ny fiarahamonina.
Araka ny nambaran’i Choc Cuz dia notanana tao an-trano nandritra ny 18 ora mahery ry zareo, tsy navela hihinana na hisotro, ankoatra ny daroka nataon’ilay fianakaviana. Nalain-dry zareo ny akanjony sy ny fanaka ary ny kojakoja an-dakozia; nanana fikosoham-bary izy mba hanaovana nixtamal (koba tortilla avy amin'ny koba katsaka), vata fampangatsiahana, milina fanjairana ary bisikileta telo.
Heverina ho mpitarika ara-panahy ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy i Choc Cuz ary anisan'ny mpanohitra ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ao El Estor ihany koa. Nampangain'i Mario Caal Pec, rahalahin'i Selvin Pec, tompon'ny onjam-peo Evanjelika La Voz de Chichipate (Ny Feon'i Chichipate), ho mpamosavy izy. Manana fifandraisana akaiky amin'ireo fiangonana evanjelika hiringiriny ao amin'ny firenena ny Filoha Goatemalteka Alejandro Giammattei , indrindra amin'ireo lohahevitra mampisara-bazana an'i Guatemala, toy ny lalàna momba ny fahasalamana ara-pananahan'ny vehivavy.
Any Goatemalà, milaza ny tenany ho Kristianina ny ankamaroan'ny olona: araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2015 , ny 45 isanjaton'ny Goatemalteka no milaza fa Katolika ary 42 isanjato no milaza ho evanjelika. Mihamafy orina hatrany ny fivavahana protestanta any Goatemalà.
Maro amin'ireo vazimba teratany no mampihatra ny Katolisisma na ny Evanjelisma, indraindray mampitambatra ny Kristianisma amin'ny finoana Mayana amin'ny fampifangaroam-pinoana. Araka ny tatitra sy ny fanisam-bahoaka, ny vazimba teratany — izay ahitana foko 24 — no mandrafitra anelanelan'ny 45 isanjato ka hatramin'ny 60 isanjaton'ny mponina ao Goatemalà. Milaza ny Vondronasa Iraisampirenena Misahana ny Raharaham-bazimba (IWGIA) dia milaza fa “fantatra tsara ny hantsana eo amin'ny mponina vazimba teratany sy tsy teratany eo amin’ny lafiny asa, fidiram-bola, fahasalamana ary fanabeazana. Ahariharin'ny antontanisa ny maha-raiki-tapisaka ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fanilikilihana mihatra amin'ny vazimba teratany.”
Hoy i Choc Cuz: “Nampangain’izy ireo ho mpamosavy aho, nefa mpitarika ara-panahy aho. Mitaky ny rariny amin’ny manam-pahefana aho. Nanafika ahy ingahy Simón Tun Sacul, nandrahona ny hanapaka ny lohako, ary manondro ny tenany ho Kaibil [vondrona ambony ao amin'ny tafika] izy, ary nanipy ahy tamin'ny tany. Tsy nanao heloka bevava aho. 7 ny zanako. Olona tsara daholo izy ireo. Nototofan’ireo mpanafika ahy tamin’ny lasantsy ny vatako. Ampangaiko ny COCODE [ny filankevitry ny vondrom-piarahamonina], izay nanohana izany rehetra izany.”
Nanameloka ireo fisehoan-javatra ireo i Humberto Cuc, mpikambana ao amin'ny Filan-kevitra ara-drazana Q'eqchi’ Maya, ary nilaza izy fa mpitarika ara-panahy sady ao anatin'ny Filankevitra ara-drazana i Choc Cuz: “Nanatontosa lanonana Mayana niaraka taminy izahay, mampalahelo ny nanjo azy. Imbetsaka ny olona no diso. Heveriny fa milalao ody izahay amin'ny fanatontosanay ny fomba amam-panaonay. Manaja ny fivavahana evanjelika anefa izahay. Raha mahita anay mampiasa labozia ry zareo, dia miampanga anay ho mpamosavy.”
Nomarihany ihany koa fa efa hatry ny ela ny filankevitra ara-drazana no niaro ny havoana sy ny renirano, na dia tsy jerena sy heverina ho tahaka izany intsony aza izahay eo imason’ny fiarahamonina.” Ankahalaina i Choc Cuz satria anisan'ny mpanohitra ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, nanomboka ny fankahalana azy rehefa nanomboka nanambara sy nanameloka ny zava-drehetra momba ny asa fitrandrahana izy tamin'ny Oktobra,” hoy i Humberto Cuc.
Misedra disadisa ny tanànan'i El Estor noho ny fanoheran'ny mponina ny orinasa mpitrandraka nikela iray an'ny Guatemalan Nickel Company (CGN), sampana avy amin'ny vondrona Soisa Solway Investment. Araka ny filazan'ny mponina, izay Mayan Q'eqchi’ ny ankamaroany, mandoto ny Farihin'i Izabal ary mampihena ny isan'ny trondro ny toeram-pitrandrahana Fénix. Tamin'ny faran'ny taona 2021, taorian'ny fitolomana an-taonany maro izay niatendro tany tamin'ny faratampon'ny hetsi-panoherana, niaina teo ambany fahirano nataon'ny governemantan'i Goatemalà ny mponina ary arahan'ny miaramila mitam-piadiana maso.
Tamin’ny telo ora maraina no navotsotra ilay mpitarika ara-panahy rehefa niala teny an-toerana ny olona, ​​afa-tsy ireo mpikambana 15 ao amin’ny COCODE izay nihazona azy tao an-trano.
Taorian'ny namotsorana an'i Choc Cuz sy ny zanany vavy nahazo ny fanohanan'ny solontenan'ny Biraon'ny Mpanelanelana momba ny Zon'Olombelona sy ny Polisim-pirenena, dia nilaza tamin'ny Prensa Comunitaria i Choc Cuz hoe: “Ny COCODE [Filankevitry ny Fampandrosoam-piarahamonina] notarihin'i José Ich no nigidragidra tamiko. Tonga nandoro ny tranoko tamin’ny lasantsy izy ireo sy hisambotra ahy, nijanona teny an-dalambe aho, nodorany ny fananako rehetra, ary nodorany ny taratasin’ny taniko sy ny vola quetzales dimy arivo.
Nisy mangana teo amin’ny handriny rehefa navotsotra izy. Nandrara azy tsy hiverina eny anivon’ny fokontany ireo nanafika azy ary nilaza fa hanao fivoriambe izy ireo amin’ny 18 mey mba hanolo-kevitra ny handroahana azy. Nametraka fitarainana tany amin’ny Fampanoavana ilay mpitarika ara-panahy.
Naneho hevitra ny mpisolovava Juan Castro, avy ao amin'ny Biraon'ny Lalàna miaro ny Vazimba teratany, fa amin'ny ankamaroan'ny raharaham-pitsarana dia avelan'ny Fanjakana amin'izao tsy mahazo sazy ny fanitsakitsahana goavana tahaka izao. Nomarihany ihany koa fa tsy misy ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ny heloka famosaviana.
Nanazava i German Choc, avy ao amin'ny Fiaraha-Mientan'ny Mpitarika Ara-Panahy “Oxlaju Q'anil”, fa anjara asan'ny mpitarika ara-panahy eo amin'ny fiaraha-monina ny manampy olona, ​​ny mampiroborobo ny fomba fanao ara-kolontsaina Mayana, ny mamaha olana, ary contadores del tiempo [mpanandro] ihany koa ry zareo.
Nilaza i German Choc hoe : “Mitaky amin'ny Fanjakana aho handray andraikitra hanafoanana ireny tranga ireny. Mitaky ihany koa aho mba hampitsaharan'ny mpitarika fiangonana sy sekta ny fanenjehana ireo mpitarika ara-panahy ho mpanao heloka bevava sy ny hampiroboroboan-dry zareo ny fiaraha-miaina am-pilaminana, mba hamela ny Vazimba hanatanteraka ny fanaony ara-kolontsaina sy ara-panahy araka ny voalazan'ny Lalàmpanorenana ara-Politikan'ny Repoblikan'i Goatemalà ao amin'ny andininy faha-66, izay ankatoavana, anajana ary ampiroboroboan'ny Fanjakana ny fomba fiainana, ny riba sy ny fomba amam-panaon'ny vazimba teratany, ny endrika fikambanana ara-tsosialy, ny fampiasana ny fitafiana, ny fiteny ary ny fitenim-paritry ny vahoaka samihafa ao Goatemalà.”